Manje usungakwazi ukugcina i-Samsung Gear S3 eSpain | Izindaba zamagajethi
Manje usungayibekisa i-Samsung Gear S3 eSpain
AbakwaSamsung bebelokhu bebheja kuma-smartwatches abo eTizen isikhashana, uhlelo lokusebenza olunikeza ukuzimela okukhulu ngokungafani ne-Android Wear ngaphezu kokuyeka ukuncika ku-Google kanye nezidingo eziya ngokuya ziphezulu zabafana base-Mountain View, ngokungabi nemikhawulo ebekwe kubakhiqizi nakonjiniyela. Imodeli yakamuva ye-Samsung, iGear S3, njengaphambi kwayo, iyithuluzi elimangaza kokubili ukwakheka nokusebenza kwalo. Isizukulwane sesithathu sale modeli sesingabhukwa eSpain kuze kube nguNovemba 30 olandelayo.
IGear S3 ifinyelela emakethe yaseSpain ngemuva kwezinsuku ezimbalwa yethulwe eSouth Korea, e-Australia, eDubai, eFrance, e-United Kingdom, e-United States… futhi singayithola ezinhlotsheni ezimbili ezihlukene: iGear S3 Frontier neGear S3 Classic. Uma ungomunye wabasebenzisi ongenantshisekelo yokwenza ukubhuka kepha unentshisekelo kukho, kufanele wazi ngoDisemba 1 ozayo uzoqala ukudayiswa ngokusemthethweni, ngewebhusayithi yakwa-Samsung nangabasabalalisi abahlukahlukene abagunyaziwe.
Njengokwenyusa kwethulwa Esitolo esiku-inthanethi sakwa-Samsung kusuka ngoNovemba 28 kuya kuDisemba 15, abasebenzisi bazojabulela isipho esingu- € 50 abazosisebenzisa ekuthengeni kwabo okulandelayo kule webhusayithi. Kubo bonke abanye abathengisi, abathengi bazothola isaphulelo esingu- € 50 uma bethenga iGear S3 uma behambisa iwashi labo lakudala. Bangasebenzisa ngokunenzuzo lokhu kunikezwa kusuka ngoDisemba 1 kuya ku-15.
Ngenkathi iGear S3 Frontier yakhelwe imimoya yamahhala ehlala ikulungele ukuzijabulisa, iGear S3 Classic isinikeza idivaysi ye-avant-garde enokuthinta okulungile okuyinkimbinkimbi amakhasimende amaningi ayifunayo uma echitha imali eshisiwe. Intengo yawo womabili amatheminali, kungakhathalekile imodeli yawo nokuqedwa kwawo, ngoba zombili zinokucaciswa okufanayo, ngama-euro angama-399.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » SmartWatch » Manje usungayibekisa i-Samsung Gear S3 eSpain
Lo ngumqondo we-ZTE weNubia yayo engaphansi kwe-bezel
Isikrini esiphathekayo esingu-24-intshi se-smartphone noma i-laptop yakho